Ogaden News Agency (ONA) – Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee Jabhadda
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee Jabhadda
Wararka nagasoo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in dagaalo isugu jira kamiino iyo weeraro lagu qaaday askarta daalan ee gumaysiga Ethiopai ee kusugan Dalka Ogaadeeniya.
Hadaba warbixinada milatari kuwoodii ugu dambeeye ee nagasoo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ahaa dagaalo u dhacay sidatan;
– 23/07/2012 kamiin si qorshaysan loogu dhigay askarta mooraalka jabsan ee gumaysiga Itobiya meesha lagu magacaabo Boodhcaano ayaa waxaa lagaga dilya 5 askari.
– 17/07/2012 Dagaalo kakala dhacay Deegaanada kala ah Libaaxle, Qudhacle iyo Goora-dheere oo kawada tirsan Iimay-bari ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 askari halka dhaawacuna uu kor udhaafayo 10 kale.
– 28/07/2012 kamiin loo dhigay gaadiid milatari oo uu gumaysigu lahaa oo marayey Deegaanada kala ah Laxmaal iyo Buurgaal oo Dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo kawada tirsan ayaa waxaa gaadiidka gumaysiga lagu gaadhsiiyey khasaare lixaadleh
– 22/07/2012 Deegaanka lagu magacaabo Cirday dagaal kadhacay ayaa waxaa askarta daalan ee gumaysiga gabalkiisu dhacay lagaga dilay 2 askari